Onyinye Planeta 2019 maka Javier Cercas. Ikpeazụ: Manuel Vilas | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Asọmpi na Awards, Ndị edemede, Ihe omume, Noticias
N'abalị ikpeazụ Onyinye mbara ala 2019 ka onye edemede ahụ were Ụlọ nke Javier, na akwụkwọ akụkọ ya Na Alta. Onye ikpeazu bu Manuel Villas, con Ọṅụ. Anyị na-enyocha ọnọdụ nke ndị edemede abụọ a bụ ndị na-ejedebe na obere onyinye a kwa afọ.
1 Onyinye mbara ala 2019
2 Onye mmeri - Javier Cercas
3 Onye ikpeazụ - Manuel Vilas
Onyinye mbara ala 2019
El ugwu ugwu ma nyekwa ya onyinye kacha mma ego nke mkpụrụedemede Spanish (yana euro 601.000 maka onye mmeri na 150.250 maka onye ikpeazụ) nyefere ya n'abalị ụnyaahụ Barcelona na ya Mbipụta 68th. Na ụfọdụ esemokwu ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ laa azụ nke ọdịmma n'etiti abụọ dị iche iche na-ebipụta akwụkwọ nke mba anyị gbasara mbipụta Spanish. Ma ọ bụ na onye mmeri abụọ, Javier Cercas, na onye ikpeazụ, Manuel Vilas, na-ahapụ Gulọ Penguin Random site na Planet. N'ezie ọ bụ ịmata ma ọ bụ, kama, na mmalite ọha nke mgbede ahia mgbede n’etiti ndị Refeyim abụọ ahụ na-ebipụta akwụkwọ.
Onyinye nke mbara ala abụrụla ndị na-akwụghachi ụgwọ na-akwụ ụgwọ na-ekwu karịa azụmahịa na ewu ewudị ka Santiago Posteguillo afọ gara aga, Dolores Redondo ma ọ bụ Javier Sierra, na ndị ikpeazụ dịka Pilar Eyre ma ọ bụ Mara Torres. Na afọ a odi ka achoro ichota nguzozi n'etiti oke akwukwo na ahia ahu.
Onye mmeri - Javier Cercas
Onye edemede na columnist nke Extremaduran, onye edemede n’etiti ndi ozo Ndị agha nke Salamis, abụwo onye mmeri nke mbipụta a maka akwụkwọ akụkọ ya Na Alta. Ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ ugbu a na akụkọ banyere isi okwu nke usoro Catalan. Onye n'ezo ya anya bu Melchor Marín, onye bụbu onye omekome a mara ikpe, weere dị ka dike na ọgụ jihadist nke 2017 na onye na-arụ ọrụ dị ka a mosso d'esquadra. Agaghị eme omume n'ezie, nke dịkwa oke ọchịchọ.
Marín ị ga-enyocha okpukpu atọ na Cercas were aha ahụ dika Aha nzuzo ma gbanwee aha nke akwụkwọ akụkọ a ga-enye maka onyinye ahụ. Ebumnuche gị bụ usoro nke akụkọ ndị ọzọ banyere ụdị ojii na akụkọ doro anya.
Ọrụ ndị ọzọ nke Cercas bụ Mmebe nke ozugbo ma ọ bụ Eze nke ndò.
Onye ikpeazụ - Manuel Vilas
Onye ikpeazu bu Manuel Vilas, onye edemede si Huesca, onye edemede na edemede na akuko. Emeela Ọṅụ, nke yiri ka ọ bụ a sequel nke afọ gara aga kachasị ire na akwụkwọ edemede bụ Ordesa, ọrụ autobiographical nke atụgharịrịrịrị na asụsụ iri na abụọ. Gbanye Ọṅụ anyị nwere onye na-akọ ya bụ a onye na-ede akwụkwọ n’etiti afọ, bụ́ onye na-eru uju oge na-aga na ọnwụ nke ndị a hụrụ n'anya. Ya mere, gbalịa gbanahụ ịda mba ma mee ka hà bu feliz.
Vilas tinyekwara onyinye ahụ na a Aha nzuzo, nke onye Sweden na-eme ihe nkiri Viveca Lindfors kwuru, na aha ọzọ maka akwụkwọ akụkọ ahụ: Dị nnọọ ka anyị mere.
Ọrụ ndị ọzọ Vilas bụ Spain, onyinye onyinye o Lou Reed bụ onye Spanish.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Asọmpi na Awards » Onyinye Planeta 2019 maka Javier Cercas. Onye ikpeazụ: Manuel Vilas
Enrique Jardiel Poncela, onye na-ede uri. Abụọ ahọpụtara ahọrọ